ATAOVY PRAIMINISITRA REMENABILA ! – MyDago.com aime Madagascar
ATAOVY PRAIMINISITRA REMENABILA !
Efa tsy manambana intsony ny adim-poko any amin’ny distrikan’Amboasary, Morombe, Belo hoy CT Tsianihy. Porofointsika ho henon’ireo mpitondra hoy izy, fa tamin’ny fandalovan’ny PM Beriziky tany Amboasary dia nisy olona notapahan’ny olona ny lohany. Nojeren’ireo fotsiny anefa izany, ary foko maromaro no nanao izany. Tany Esira, Morombe, Belo ihany koa hoy izy tamin’ny fandalovan’ny komandin’ny zandary tany dia mbola nitranga izay fanapahan-doha izay. Izay no ilazana fa tsy manambana intsony ny adim-poko fa efa loza mitatao. Mandainga hoy Tsianihy ny foloalindahy fa misy adim-poko lehibe ao ka izay no tsy ahitana an’i Remenabila. Namaly ny Les As ihany koa ny tenany. Rehefa te hisolelaka amin’ny frantsay ianareo hoy izy dia rehefa maty ianareo dia alefaso any frantsa, fa ny Malagasy manontolo tsy manaiky handevozin’ny frantsay. Raha tianareo hoy Tsianihy ny fahazoana an’i Remenabila dia eto ao Ambohitsirohitra hatao Praiminstra. Ny zavanisy teto hoy izy dia ny fanjanahana nataon’ny frantsay taloha. Izay no tian-dRajoelina averina eto. Tamin’ny taona 1960 dia nanondrana vary isika,ka izay no tiany alaina tahaka. Tamin’ny 2003 anefa hoy izy dia nahaleontena ara-bary isika indrindra ny tany amin’ny faritra Andrefana. Tsy tandidin-dRajoelina hoy ity mpanao politka ity, ny fotoana nisian’ny vary tamin’ny andron’ny filoha Ravalomanana dia tsy naka tahaka ny tamin’ny taona 60 izy fa ny 2003 no akaiky. Misy fetrany ny fandeferana, fa raha hamerina ny zavatra tsy manjary eto ny frantsay dia taloha famaky sy lefona no nentina fa amin’izao efa hafa ka ho hitantsika eo.
« Praiminisitra » MONJA ROINDEFO Zafitsimivalo
Fanatera Longin : ataovy mifanaraka amin’ny tondrozotra ny amnistia
Auteur Solo Razafy*Publié le 30 juin 2012 Catégories Politique
4 réflexions sur « ATAOVY PRAIMINISITRA REMENABILA ! »
1 juillet 2012 à 13 h 43 min
Dia lasa ny fisainana fa ny dahalo tahaka izao no mety ho lasa mahery fo raha toa ka mandresy ireo EMMOREG mpamono vahoaka sy mpanogam-panjakana ireo. sady tsdy fantra mazava tsara hoe dahalo ahona i Remenabila, fatoa mpinamana iohany ry zareo teo aloha
1 juillet 2012 à 19 h 01 min
mbola olondehibe ihany ve ny olona toa itony?Ampianaro ny zaza vao manao politika!mapalahelo;tsisy vidiny mihitsy io volombabavan’osy io !
2 juillet 2012 à 11 h 40 min
tsy aleo atao hoé mouvance remenabila satria ny tafika fotaka aza tsy maha resy azy
ry békibo be galona mbola variana miady taoalana sy manararaotra sao tafaverina eo
ihany ny ara dalana
3 juillet 2012 à 7 h 35 min
Tsy hita e ! Ny mba hain’ny Capsat sy ny miaramilan’ny foza dia ny mitoraka baomba ny vahoaka tsy manantsiny sy ny manongam-panjakana. Tsy misy hapoaka rehefa eo anatrehan’ny dahalo. Jeneraly sy Colonels no mameno tanàna, nefa tsy haninona tsy haninona. 126 no isan’ny nataon’ny foza nahazo ny grade de Colonel feno tamin’ny herinandro teo. Maninona moa raha régiment de colonels no alefa miady amin-dRemenabila, dia ho hita eo no mba afitsony.
Précédent Article précédent : NY VAHOAKA MALAGASY NO MITAKY NY FODIAN-DRAVALO !
Suivant Article suivant : TSY MAHAVANONA FITONDRANA RAHA TSY MIARAKA AMIN’NY FILOHA RAVALOMANANA